Fikomiana :: Voasoroka ny fikasan’ireo marary hitsoaka tany Toamasina • AoRaha
Fikomiana Voasoroka ny fikasan’ireo marary hitsoaka tany Toamasina
Nanapa-kevitra ny hivoaka ny toerana itazonana azy ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » tao amin’ny Ivon-toerana ara-tsosialy tao amin’ny Cité Canada any Toamasina, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Voasoroka io fikasana mety hiteraka famindrana valanaretina amin’ny olon-kafa ety ivelany io. Isan’ny anton’ny fihetsik’ ireo marary ireo ny fitarazohan’ny fivoahan’ny fitiliana natao tamin’izy ireo.
« Tazonina ato fotsiny izahay. Tsy misy fanafody omena anay. Matetika no misy fahatarana ny fahatongavan’ny sakafo sady tsy mahavoky akory », hoy ny fimenomenon’ireto olona mitondra ny tsimokaretina saingy tsy ahitana soritr’aretina. « Misy aminay no efa ela no notazonina tato. Nisy fotoana aza very hono ny fitiliana natao taminay », araka ny fanampim-panazavan’izy ireo.
Teo am-pikononkononana hitsoaka izy ireo no tonga ireo mpitandro ny filaminana avy amin’ny Emmo-Reg nanakana an’izany fikasana izany. « Ny fahataran’ny valin’ny fitiliana no isan’ny niteraka an’izao fikomiana izao. Misy amin’izy ireo no efa ao nandritra ny dimy ambin’ny folo andro ary miandry ny fitiliana farany », hoy Razafiarison Jean Jugus, Préfet-n’i Toamasina .
Haingana ny fidirana antsehatra tamin’ny fanakanana ny fivoahan’ireo marary tao amin’ity toerana tany Toamasina ity. Manohy ny fiambenana ny faritra itazonana azy ireo ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina hatrany ny mpitandro ny filaminana. « Tonga ara-potoana ny Emmoreg ary nandray ny andraikitra tandrify aza avy hatrany manampahefana aty an-toerana », hoy hatrany ny Préfet.
Nambaran-dRazafiarisoa Vavy Célestine, talem-paritry ny fahasalamana any Atsinanana, fa « hojerena ny daty nanaovana ny fitiliana sy izay tokony hivoaka mialoha ho an’ireo olona ireo. Misy amin’izy ireo mantsy no efa nahavita ny fitsaboana saingy miandry ny fitiliana farany mba hanamarinana ny fahasitranany. Misy kosa, hoy izy ireo mbola tena ao anatin’ny fitsaboana ». Anisan’ireo tonga tao amin’ny Cité Canada any Toamasina ka nandamina an’ireo marary niaraka tamin’ireo mpitandro ny filaminana ny talem-paritry ny fahasalamana any Atsinanana, araka ny voalazan’ny Prefe-n’i Toamasina.
Tetiandrom-pampianarana :: Fandaminana manaraka ny momba ny fanadinana fifindrana kilasy
Fivoaran’ny valanaretina :: Nahafaty olona roa indray ny coronavirus